DCS usoro Digital ọgụ simulator ỤWA 3 afọ 3 ọnwa gara aga #411
Mgbagha Digital Combat Simulator World (DCS World) bụ ogige na-egwu egwu na-egwu egwu, na-elekwasị anya na mgbochi ụgbọelu agha. Ọ na-agụnye TF-51D Teta na ụgbọ elu agha-ọgụ na-ewe Su-25T.
DCS World 2 chọrọ DCS: Ntọala nke nyocha Nevada Test (NTTR), nke na-agụnye ikuku ụgbọ elu kachasị elu na ohere ala maka arụ ọrụ agha n'oge ọ bụla na ụwa n'efu. Ala NTTR na-agụnye usoro nchebe elu ikuku, ikuku ọdụ ụgbọelu, na ọtụtụ ebe a na-eche nche. A na-ejikwa NTTR mee ihe maka ule nuklia. Taa, ọ bụ ụlọ RED FLAG na mmemme ndị agha ndị ọzọ gụnyere mba si gburugburu ụwa. NTTR map maka DCS World 2 gụnyere Nellis AFB, akara AFB, Airport McCarran Airport na aha ọjọọ ọdọ mmiri AFB (Aka Area 51). Map a na-agụnye obodo Las Vegas, McCarran International Airport, na Hoover Dam.
Lee gị niile na Nellis AFB maka Ọrụ Red Flag Gentlemen!
M-2000C bụ ọrụ dị iche iche, ndị France, ndị na-agba ọsọ 4th. Emere ya na 1970s dị ka onye na-eji ọkụ ọkụ ma na-ebugharị 600 M-2000C ụgbọelu. M-2000C bụ onye na-arụ ọrụ na-ejikọta otu ọkpụkpụ na-enweghị ọkpụkpụ. O nwere nnukwu ihe eji eme ka o nwee ike iru ala na usoro ikuku ụgbọ elu. M-2000C na-agụnyekwa radar DRI dịgasị iche iche nke nwere ike nyochaa ma na-etinye uche na-agafe karịa akara ngosi. Na mgbakwunye na itinye ụgbọ elu ndị ọzọ na egbe na ụta, M-2000C nwekwara ike itinye ihe ndị e ji eme ihe na ala, ụgbụ mmiri na bọmbụ. M-2000C bụ nke zuru okè maka ogige agha nke DCS World!
Frog na-emepụta F-5E site na Northrop Corporation na mmalite 1970s. Onye na-eji aka ya eme ihe dị mma bụ nsụgharị nkwalite dabere na F-5A gara aga. Ọrụ ọgụ F-5s gụnyere ikuku elu, nkwado ala, na ọgụ ala. N'iburu na mgbanwe ya, mgbanwe nke ọrụ, na ụgwọ dị ala, Tiger II nwere, ma na-aga n'ihu, na-arụ ọrụ, ụgbọ elu igwe na ụwa.
A na-eji F-5AS ejiri ogwe aka 20-mm М39-А3 abụọ na 280 agba gburugburu ọ bụla. Enwere ike ị na-ahụ ya na ngalaba imi, n'ihu nke ọdụdụ. A na-eji ndị na-agbapụta pụrụ iche iji zere ọnọdụ nkwụsị nke nrụrụ gas na-emepụta dịka ihe ntanetị nke ọrụ M-39-A3. Ogwurugwu ọ bụla nwere ikike ịmalite ihe na 1500 gaa na 1700 gburugburu kwa nkeji.
Onye ọ bụla wingtip na-ejikọta ọkpụkpọ nwere ike ịmalite ịmịja AIM-9 infrared eduzi.
Ihe ise siri ike (otu centerline pylon na pyrons anọ) na-ekwe ka ụgbọelu ahụ buru ngwá agha dị iche iche (bọmbụ, ụyọkọ agha, na rockets) 6,400 pound (banyere 3000 kg) na mkpokọta. Tụkwasị na nke a, enwere ike itinye ihe mkpuchi ọkụ na ngwa ngwa. Iji mee ka oge ụgbọ elu na oge dị elu, a na-ejikọta tankị mmanụ ụgbọ mmiri na ihe isi ike atọ (pylon pyline na pylon abụọ). Enwere ike ime ka mneuverability na ọsọ dịkwuo elu na ọgụ site na ịkwanye ụlọ ahịa niile.
F-15 Eagle | Na oke
A na-akpọkarị F-15 dịka ụgbọ elu nke United States kachasị ukwuu na 1970s ruo mmalite 21st narị afọ. F-15C bụ onye agha dị ọcha na arụmọrụ pụtara ìhè ma merie ihe mmeri NNNXX n'igwe na-enweghị nhụjuanya ọ bụla kwadoro. F-100C nke na-enwu ọkụ na DCS gụnyere akara ngosi ụgbọ elu nke ndị ọkachamara, ihe ngosi 15 zuru ezu nke nnwere onwe nwere ike ịnweta ọdụm, ezigbo ihe nlereanya na ụda.
Dị ka DCS Flaming Cliffs title, F-15C na-elekwasị anya na-adị mfe nke iji na-enweghị mgbagwoju anya cockpit nkwurịta okwu, budata ibelata usoro mmụta. Dị ka nke a, F-15C na-eji akara keyboard na ọṅụ na-arụ ọrụ na-elekwasị anya na ihe kachasị mkpa nke usoro ọdụdụ ọdụdụ.
A-10C: Ntutu Uhie 16-2
DCS: A-10C Warthog bụ ngọngọ PC nke ụgbọ elu ụgbọ elu nke United States. Nke a bụ ụgbọ elu nke abụọ na usoro DCS, na-agbaso DCS: Black Shark, ma welie mmanya ahụ karịa ọkwa dị elu na DCS. Warthog na-eweta mgbagwoju anya nke kachasị mma nke PC nke ụgbọelu agha nke oge a na-eche banyere mgbagwoju anya, ụgbọelu, ihe mmetụta, na ngwá agha.